अबको प्रधानमन्त्री वामदेव : ओलीले विश्वास गरेको कि प्रचण्डले तान्न खोजेको ? – Setosurya
शुक्रबार ०१, भदौ २०७५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)भित्र नेतृत्वसँग हाकाहाकी कुरा राख्न सक्ने वामदेव गौतम अहिले मौन छन् । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेपछि चर्को बोल्न छोडेका उनी अहिले मौन प्राय छन् । उप निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ल्याउन लागिएको कुरा बाहिर चुहिएपछि उनी बाहिर त के पार्टीभित्र पनि मौन बसेका छ । उनी निकटस्थहरु भन्छन, ‘ठाउँ यकिन भईसकेको छैन । तर, वामदेव कुनै न कुनै रुपमा उपचुनाव लड्नुहुन्छ र भावी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’
उनी निकटहरु यसो पनि भन्छन्, ‘ओली गुटलेनै वामदेवलाई हरायो ।’ तर, वामदेव जस्ता हक्की र कडा स्वभावका नेता यसबारेमा केही बोलिरहेका छैनन् । उनको मौनताभित्र केही न केही लुकेको छ । स्रोतका अनुसार वामदेवले फेरि चुनाव लड्नुपर्छ भनेर पार्टीका कसैलाई पनि नचिढ्याउने रणनीति लिएका छन् । त्यही कारण उनी अहिले मौन बसेका बताईन्छ ।
पहिले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि सिंगारियो
अघिल्लो रुपान्तरित संसदकालमा वामदेव गौतमलाई तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि भित्रभित्रै तयार पारेका थिए, अर्थात् सिंगारेका थिए । तर, त्यो बीचमा अहिलेका नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले ओली सरकार ढालेपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने वातावरण बन्न दिएनन् । स्रोतले भन्यो, ‘दाहालले नै बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोके भन्दा हुन्छ ।’ त्यो बेला एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा थिए, ओली ।
वामदेवको नेतृत्वमा निर्वाचन गराएर ठूलो पार्टी बनाउने दाउ ओलीले रोजेकै हो, भन्छन् जानकारहरु । त्यो हुँदा एउटा ठूलो कम्युनिष्ट घटक र प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग चुनाव लड्दा कठिनाई हुने बुझेर ओली पछि हटे । त्यो सबै सेरोफेरोबारे पार्टीभित्र बहस भएपछि माओवादीलाई अँगालो हाल्न पुगेको दृष्टान्त सुनाउँछन् जानकारहरु ?
अहिले पनि नेकपाको पार्टी एकताको कोर्षले त्यो बेला पार्टी एकताबारे त्यति धेरै बहस नभएको र चुनाव लक्षित गठबन्धन मात्रै भएको बताईँदैछ ।
ओलीले तत्काल आफूलाई मधेसवादीले समर्थन नगर्ने र भारतले पनि सहयोग नगर्ने सोचेर एमालेको सरकार बन्ने अवस्था आए वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति लिएका थिए । पछि चुनावमा वाम गठबन्धन बनेपछि मधेसवादीलाई पनि उनले तर्साए ।
प्रधानमन्त्रीको कुरा चल्नेवित्तिकै वामदेवले चर्का कुरा बोल्न छाडेका थिए । भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा पनि बामदेवले बोलेनन् । बोल्नुपर्छ भनेर उनी सार्वजनिक कार्यक्रम समेत छल्न थाले । उनी निक्कै संयमित भएर हिँडे । तर, त्यो कालखण्डमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बनेन ।
वाम गठबन्धनको एक प्रमुख सूत्रधार वामदेव गौतम आफै चुनाव हारे । गएको मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका तत्कालीन एमालेका वामदेव गौतम कांग्रेस उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग हारेका हुन् । अहिले उपचुनावबाट संसदमा ल्याउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आन्तरिक तयारी थालेको बताईँदै छ ।
पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका नेकपाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न लगाएर डोल्पामा उपचुनाव गराएर गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी भएको सुनिन्छ । तर, राज्यमन्त्री बुढा सयबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन एमाले प्रवेश गरेर सभासद् समेत बनेका बुढा गएको मंसिरमा भएको चुनावमा पनि ११ हजार ७ सय ६१ मत ल्याउँदै विजयी भएका थिए । एमाले प्रवेश गर्नुअघि बुढा लामो समय राप्रपाको राजनीतिमा थिए ।
वामदेवको संसद प्रवेश किन ?
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता भएको खण्डमा आफ्नो तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीमा गौतमलाई अघि सार्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
अहिले पार्टी पनि एक भइसकेको छ । अहिल्यै प्रधानमन्त्री परिवर्तन नभए पनि गौतमलाई संसदमा ल्याउन पाए आफू बलियो बन्ने बुझाई दाहालको छ ।
दाहाल र गौतम लामो समयदेखि निकट मानिन्छन् । यतिसम्म कि गौतमले भनेको कुरा दाहाल काट्दैनन्, दाहालले भनेको कुरा गौतम काट्दैनन् । अघिल्लो पटक ओली सरकार फुटाउने पहिलो प्रयासमा गौतमले नै ब्रेक लगाएका थिए । उनले दाहाल निवासमा एक कप चिया पिउँदा पिउँदै दालको युटर्न गराईदिएका थिए ।
तर, अहिले गौतम प्रतिनिधि सभामा आउने कुराले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र ठूलै कम्पन उत्पन्न भएको बुझिएको छ । मुख्यगरी गौतमले उपचुनाव लड्ने प्रसंगले पूर्व माओवादी केन्द्रपट्टी बढी चर्चा पाएको बताईन्छ । तर, ओलीले विश्वास गरेर ल्याउन लागेको कि दाहालले आफु बलियो हुन वामदेवलाई ल्याउन लागेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
आधार के ?
पूर्व एमालेभित्र सबैभन्दा सक्रिय नेता हुन्, वामदेव गौतम । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली तर्सन्छन् त वामदेव गौतमसँग । नेकपाभित्र अहिले अन्य नेताहरुले ओलीसँग सवाल जवाफ गर्न सक्दैनन् । ओलीसँग ठाडठाडै मुख लागेर, हप्कीदप्की गरेर बोल्न सक्ने नेता वामदेव मात्रै हुन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बोल्नै सक्दैनन् । उनी पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको भनि निकटस्थहरुसँग गुनासो मात्रै गर्न सक्छन् । अर्का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई त कारिन्दै बनाईदिएका छन्, ओलीले । जानकारहरु भन्छन्, ‘ओलीसँग ठाडै बाझ्ने र अडान राख्ने भनेर वामदेव चर्चित छन् ।’
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका र त्यसपछि पनि ओलीलाई निरन्तर सघाउँदै आएका वामदेवलाई नेतृत्व वृत्तले निक्कै इमान्दार पनि भन्दछ । ‘वामदेव छलकपट गर्दैनन्, जे कुरा पनि ठाडै र प्रष्ट भन्छन्, त्यसैले ओलीले पनि विश्वाश गर्छन्’–निकटस्थहरु भन्छन् । यही कारण ओलीले अघिल्लो पटक वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका थिए । त्यहीबाट वामदेवको शक्ति अझ बढेको थियो ।
उनकै निवासमा कयौँ पटक पार्टीको बैठक बस्यो । तर, चुनाव हारेपछि उनी मौन भए । अहिले पनि उनको निवासमा ओलीपछि सबैभन्दा धेरै कार्यकर्ताको भीड लाग्ने गर्दछ । अब प्रधानमन्त्री बन्ने आधार उनको यही हो, भन्छन् निकटस्थहरु ।हाम्राकुराले जनाएको छ । hamroeconomy बाट साभार
अाफ्नै मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी माथी यसरी खनिए प्रदेश सांसद राजिब पहारी
यसरी टुङ्गियो नेकपाका विद्यार्थिको एकता, ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी
किन पाएनन् योगेश भट्टराईले मन्त्री ? यस्तो छ कारण :
जिल्ला र प्रदेश नेतृत्व टुंगाउन नेकपाको सचिवालय बैठक चल्दै
प्रचण्ड र ओलीबीच बिबाद, दुई अध्यक्षबीच चिसो बढ्दै
एमालेभित्र चर्कियो अन्तरघात विवाद : अन्तरघातमा को–को नेता मुछिए ?
गच्छदारले यसरी सुनाए देउवाको गोप्य योजना ! देउवाले गर्दै छन् यति ठूलो निर्णय ..
श्रद्धाञ्जली सभामा सीताले ठाडो शीर पार्नै सकिनन्, बिनाको हालत यस्तो
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डसमक्ष राखे यस्तो अचम्मकाे प्रस्ताव ! देउवाको प्रस्ताव सुनेर प्रचण्ड चकित परे
लालबाबु पण्डित र शेखर कोइरालाको चुनावी भिडन्त, यसो भन्छन् लालबाबु (भिडियो)
एमाले नेता नेम्बाङलाई विप्लवको ‘सुरक्षा थ्रेट’
जनमोर्चाले दियो वामपन्थीको लागि अर्को खुशीको खबर र काँग्रेसको लागि थपिदियो अर्को चुनौती !
पोखरा बागलुङ्ग सडकखण्ड खुल्यो
माओवादी केन्द्र भत्किएर देशमा अर्को शक्ति पैदा हुँदैछ : दाहाल
दिदीबहिनी कप राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधी एपीएफलाई
बलेवा बिमानस्थलमा परिक्षण उडान, चैत्र ९ देखी नियमित हुने
बाबुराम भट्टराईले भने–विप्लबलाई कमजोर ठाने ज्वाला दन्केर आउने खतरा !
चुनाव घोषणा गर्ने प्रचण्डको प्रस्तामा मधेशी मोर्चा असहमत
प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता : भारत भ्रमण फलदायी र सफल